A Nzọụkwụ na-nzọụkwụ nkuzi maka Olee otú Jiri TidyMyMusic
Ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi maka iji TidyMyMusic idozi mislabeled songs gị music n'ọbá akwụkwọ.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ
N'ihi na iTunes Akwụkwọ:
Họrọ "idozi iTunes" nhọrọ ke ekpe panel, na pịa "Tinye iTunes Library". TidyMyMusic ga-ntabi Ibu Ibu niile music faịlụ echekwara na iTunes. Na ọ ga-akpaghị aka Ibu Ibu iTunes music n'ọbá akwụkwọ oge ọ bụla ị Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro.
N'ihi na music zọpụta na obodo ike mbanye:
I nwekwara ike igosi na Doppler-na-fix na songs na na-adịghị azọpụta gị iTunes. Họrọ "idozi Music" nhọrọ na ekpe panel na ịgbakwunye music faịlụ na ị chọrọ idozi ka usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2: Quick analysis gị music collection
TidyMyMusic ga-eme a ngwa ngwa Doppler na niile music faịlụ mgbe n'idebata dum music n'ọbá akwụkwọ. Nọmba nke na-efu ma ọ bụ mislabeled tracks na-mkpa ka a ofu ga-egosipụta na menu n'elu.
Nzọụkwụ 3: Idozi music na efu ma ọ bụ mislabeled Ama
Nanị pịa "Auto Idozi" ala n'elu menu na-amalite gwara usoro.
Nzọụkwụ 4: Kwenye ma na-etinye mgbanwe music Ama
Mgbe egwuregwu na-chọta agafe nakweere n'ebe ya music nchekwa data, TidyMyMusic ga-egosi gị na usoro egwu niile na e kwuru na na usoro. Ịnwere ike ịchọgharị na idozi ihe zuru ezu music Ama n'otu n'otu, ma ọ bụ ị pụrụ nanị pịa "Mee All" idozi mata tracks niile ke otu ugboro.
Nzọụkwụ 5: Dezie music Ama aka
Egwu na-ekweghị ghọtara site TidyMyMusic, nwere ike edited site na ọrụ aka. Nanị họrọ otu n'ime ndị tracks na menu na pịa "Dezie" dezie music Ama na album nkà dị ka ị chọrọ.
Nzọụkwụ 6: rụchaa gwara gị music n'ọbá akwụkwọ
Pịa "Rụchaanụ" Mgbe ị okokụre niile scanning na-edezi ọrụ. Niile emelitere ID3 mkpado ga-azọpụta n'ime faịlụ. Ma ugbu a, ị nwere ika-ọhụrụ-na-achọ music n'ọbá akwụkwọ na zuru ezu music Ama agbakwunyere na onye ọ bụla egwu. -Enwe!